Kutheni UThixo Evumela Izinto Ezibuhlungu Zenzeke? | Ukuncokola Nommelwane
Le yincoko ekuqhelekileyo ukuba iNgqina likaYehova libe nayo nommelwane. Masithi iNgqina elinguSiziwe lindwendwele inkosikazi enguNozipho.
UVAKALELWA NJANI UTHIXO NGEZINTO EZIBUHLUNGU EZISEHLELAYO?
Siziwe: Molo Nozipho. Ndiyavuya ukufika ukhona.
Nozipho: Ndiyavuya nam.
Siziwe: Ukugqibelana kwethu, besincokola ngendlela uThixo avakalelwa ngayo ngezinto ezibuhlungu ezisehlelayo. * Ubutshilo ukuba le yinto ubusoloko uzibuza yona, ngakumbi emva kokuba umama wakho wonzakala kwingozi yemoto. Khona, unjani umama wakho?
Nozipho: Iimini azifani wethu. Kodwa ke namhlanje uziva bhetele.
Siziwe: Ndiyavuya ukukuva oko. Inoba kunzima nyani ukuhlala unethemba kwimeko enjalo.
Nozipho: Kunzima. Ngamanye amaxesha ndiyazibuza ukuba uza kuba sentlungwini kude kube nini?
Siziwe: Kuqhelekile ukuzibuza imibuzo enjalo xa usentlungwini. Mhlawumbi usakhumbula ukuba ukugqibelana kwethu bendikushiye nombuzo wokuba kutheni uThixo evumele izinto ezibuhlungu ziqhubeke zisenzeka xa enawo amandla okuziphelisa.
Siziwe: Ngaphambi kokuba sive oko kuthethwa yiBhayibhile, masikhe sizikhumbuze ngoko besincokole ngako.
Nozipho: Akukho ngxaki.
Siziwe: Sifunde ukuba nkqu nendoda ethembekileyo eseBhayibhileni, yayizibuza ukuba kutheni uThixo evumela izinto ezibuhlungu zenzeke. Sekunjalo, uThixo akazange amngxolise ngokuzibuza oko okanye athi akanalukholo.
Nozipho: Bendiqala ukuyiva ke loo nto.
Siziwe: Sifunde nokuba uYehova uThixo uyakucaphukela ukusibona sisentlungwini. Ngokomzekelo, iBhayibhile ithi xa abantu bakhe babebandezelekile “wabandezeleka.” * Akukuvuyisi ukwazi ukuba xa sisentlungwini uThixo naye uyavakalelwa?
Siziwe: Okokugqibela, sivumelene ukuba ekubeni uMdali wethu enamandla amakhulu gqitha, ngokuqinisekileyo umele ukuba angakwazi ukungenelela aze aphelise zonke iintlungu ezikhoyo.
Nozipho: Nantso ke into endingayiqondiyo. Kutheni uThixo evumela zonke ezi zinto zimbi zenzeke xa enawo amandla okuziphelisa?
Siziwe: Singayifumana impendulo yalo mbuzo wakho ngokutyhila kwincwadi yokuqala yeBhayibhile, iGenesis. Uyalazi ibali lika-Adam noEva nesiqhamo esalelweyo?
Nozipho: Ewe, ndandilifunde ecaweni ndisemncinci. UThixo wathi bangatyi kumthi othile, kodwa bona batya.
Siziwe: Unyanisile. Masikhe siqwalasele oko kwenzekayo ngaphambi kokuba uAdam noEva benze isono. Oko kunokuthanani nempendulo yesizathu sokuba sibe neentlungu. Ndicela ufunde iGenesis isahluko 3, ivesi 1 ukuya ku- 5?
Nozipho: Kulungile. “Ke kaloku inyoka yaba yeyona ilumkileyo kunawo onke amarhamncwa asendle awayewenzile uYehova uThixo. Ngoko yathi kumfazi: ‘Utshilo ngokwenene na uThixo ukuba nize ningadli kuyo yonke imithi yomyezo?’ Wathi ke umfazi kwinyoka: ‘Kwiziqhamo zemithi yomyezo singadla. Kodwa mayela nokudla kwiziqhamo zomthi osemyezweni phakathi, uThixo uthe, “Nize ningadli kuzo, ningazichukumisi, ukuze ningafi.”’ Yathi ke inyoka kumfazi: ‘Ngokuqinisekileyo anisayi kufa. Kuba uThixo uyazi ukuba mhla nithe nadla kuzo aya kuvuleka amehlo enu nize nibe njengoThixo, nazi okulungileyo nokubi.’”
Siziwe: Enkosi. Masikhe sihlolisise ezi vesi. Okokuqala, uyabona ukuba inyoka yathetha nomfazi, uEva. Enye incwadi yeBhayibhile ibonisa ukuba yayinguSathana uMtyholi lo wayethetha naye esebenzisa inyoka. * USathana wabuza uEva ngoko uThixo wayekuthethile ngomthi othile. Ukuphawulile oko uThixo wayethe kuza kwenzeka ukuba uAdam noEva batyile kuwo?
Nozipho: Babeza kufa.
Siziwe: Unyanisile. Emva koko, uSathana utyhola uThixo ngesityholo esikhulu. Khawuphinde uve la mazwi akhe: “Ngokuqinisekileyo anisayi kufa.” USathana wayesithi uThixo ulixoki!
Nozipho: Andizange khe ndiyive loo ndawo kweli bali.
Siziwe: Xa uSathana wathi uThixo ulixoki, wavusa umba owawuza kuthatha ixesha ukuba uconjululwe. Uyazi ukuba kutheni?
Nozipho: Hay’ andiqinisekanga.
Siziwe: Mhlawumbi ndingayizekelisa ngolu hlobo le nto. Masithi ngenye imini ndiza kuwe ndize ndithi ndinamandla ngaphezu kwakho. Ubunokubonisa njani ukuba ndiyaxoka?
Nozipho: Mhlawumbi besinokwenza uvavanyo oluthile.
Siziwe: Kunjalo kanye. Mhlawumbi sifune into enzima size sibone ukuba nguwuphi phakathi kwethu okwaziyo ukuyiphakhamisa. Ukubonisa ukuba ngubani onamandla kunomnye kuyinto elula.
Siziwe: Kodwa kuthekani ukuba endaweni yokuthi ndinamandla, ndithi ndinyaniseke ngaphezu kwakho? Yahlukile leyo into, andithi?
Nozipho: Ndicinga njalo.
Siziwe: Ukunyaniseka akuyonto onokuyibonisa nje ngovavanyo olulula.
Siziwe: Yinyani leyo, bekunokufuneka kugqithe ixesha elithile ukuze abanye abantu basijonge ukuze babone ukuba nguwuphi apha kuthi onyanisekileyo.
Nozipho: Itsho yacaca kengoku.
Siziwe: Khawuphinde ujonge eli bali likwiGenesis. USathana wathi unamandla kunoThixo?
Siziwe: Ukuba wayetshilo uThixo ngewayevele wambonisa ukuba uyaxoka. Kodwa uSathana wayesithi unyaniseke ngaphezu koThixo. Wafana nothi kuEva, ‘uThixo uyanixokisela, kodwa mna ndithetha inyani.’
Nozipho: Ibangela umdla ke lento.
Siziwe: Kuba enobulumko, uThixo wayesazi ukuba eyona ndlela yokucombulula yonke lento kukuyeka kukhe kudlule ixesha. Ekugqibeleni , wayeza kuvela oyena uthetha inyani nothetha ubuxoki phakathi kwabo.
Nozipho: Ayizange icace into yokuba uThixo uthetha inyani xa uEva wafayo?
Siziwe: Ungatsho. Kodwa sasingaphelelanga apho esi sityholo sikaSathana. Khawuphinde ufunde ivesi 5. Uyiphawulile enye into awayithethayo uSathana kuEva?
Nozipho: Wathi ukuba utye kweso siqhamo, amehlo akhe ayakuvuleka.
Siziwe: Ewe, nokuba wayeza kuba ‘njengoThixo, azi okulungileyo nokubi.’ Lilonke, uSathana wayesithi uThixo uvimba abantu into entle.
Siziwe: Yayisisityholo esikhulu neso.
Nozipho: Uthetha ukuthini?
Siziwe: Ngamazwi akhe, uSathana wayesithi uEva—nabo bonke abanye abantu—wayeya kuphila kamnandi ngaphandle kokulawulwa nguThixo. Nakule imeko, uYehova wayesazi ukuba eyona ndlela yokucombulula lo mba kukunika uSathana ithuba lokuzama ukubonisa ubunyani bale nto ayithethayo. Ngenxa yoko, uThixo umvumele uSathana ukuba alawule eli hlabathi ithutyana. Yiyo loo nto sibona kusenzeka izinto ezibuhlungu kakhulu kuyo yonke indawo—kuba nguSathana oyena mlawuli weli hlabathi, kungekhona uThixo. * Kodwa zikho iindaba ezimnandi.
Siziwe: IBhayibhile ineenyaniso ezimbini ezifundisayo ngoThixo. Okokuqala, uYehova uyazixhalabisa ngathi xa sisentlungwini. Ngokomzekelo, cinga ngamazwi kaKumkani uDavide abhalwe kwiNdumiso 31:7. UDavide wayefumene izinto ezininzi ezibuhlungu ebomini, kodwa khawuve amazwi akhe ngoxa wayethandaza kuThixo. Ndicela uyifunde torho?
Nozipho: Kulungile. Ithi: “Ndiya kuvuya ndibe nemihlali ngobubele bakho obunothando, Ngenxa yokuba uyibonile inkxwaleko yam; ukwazile ukubandezeleka komphefumlo wam.”
Siziwe: Nangona uDavide wayesehlelwa zizinto ezibuhlungu, wayethuthuzelwa kukwazi ukuba uYehova uyayibona yonke into eyenzekayo kuye. Akukuthuthuzeli wena ukwazi ukuba uYehova uyazazi izinto ezibuhlungu ezisehlelayo, nkqu neemvakalelo ezibuhlungu esinazo abanye abangaziqondiyo?
Siziwe: Okwesibini kukuba uThixo akayi kuvumela izinto ezibuhlungu ziqhubeke zisenzeka ngonaphakade. IBhayibhile ifundisa ukuba kungekudala uza kuphelisa ulawulo olubi lukaSathana. Uza kulungisa wonke umonakalo oye wenzeka, kuquka izinto ezibuhlungu ezenzeke kuwe nakumama wakho. Ndicela ukubuya kwiveki ezayo ndikubonise isizathu esisenza siqiniseke ukuba uThixo uza kuphelisa zonke izinto ezibuhlungu kungekudala. *
^ isiqe. 7 Funda inqaku elithi “Ukuncokola Nommelwane—Ngaba UThixo Akabi Buhlungu Bububi Obusehlelayo?” kwiMboniselo ka-Julayi 1, 2013. Iyafumaneka nakwi-www.jw.org/xh.
^ isiqe. 17 Funda uIsaya 63:9.
^ isiqe. 26 Funda iSityhilelo 12:9.
^ isiqe. 55 Funda uYohane 12:31; neyoku-1 kaYohane 5:19.
^ isiqe. 61 Ukuze ufumane inkcazelo engakumbi, funda isahluko 9 sencwadi ethi Yintoni Ngokwenene Efundiswa YiBhayibhile? epapashwe ngamaNgqina kaYehova.